Waxa lagu arko Baiona, Galicia | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Espana, General
Baiona waa a magaalada ku taal qaybta koonfureed ee Galicia, oo u dhow xadka uu la wadaago dalka Boortaqiiska. Waxay ka tirsan tahay Aagga Metropolitan ee Vigo, oo ka tirsan gobolka Pontevedra. Waa meel aad u qurux badan goobteeda, maaddaama ay ku taal caanka caanka ah ee Rías Baixas, oo ka horraysa Jasiiradaha Cíes isla markaana ka eegaysa Badda Atlantik. Taasi waa sababta ay u tahay mid ka mid ah meelahaas waa inaan aragnaa mararka qaarkood haddii aan u dhowaanno Galicia, oo leh magaalooyin qurux badan oo ku yaal aaggan.
Waan arki doonaa dhammaantood dhibcaha aad ku arki karto Baiona iyo waxa aad sameyn karto haddii aad fasax ku qaadan doontid meeshan ku taal Galicia. Shaki la'aan waa meel aad u qurux badan oo xasilloon, halkaas oo aad ka ogaan karto muuqaalka quruxda badan ee reer Galician, gastronomy-ga aan la barbardhigi karin iyo taariikhdiisa. Marka soo ogow wax walboo ku qarsoon geeskan Galicia.
1 Ku soo wareeji Qalcadda Monterreal
2 Booqo midabkii Pinta
3 Dhadhaminta caloosha ee bartamaha
4 Booqo Bikradda Dhagaxa
5 Tag jasiiradaha Cíes
6 Xafladii imaatinka
Ku soo wareeji Qalcadda Monterreal
Marka ay timaado aragtida Baiona, waxaan ogaaneynaa in waxa soo jiidan doona dareenkeena ugu badan magaaladan ay tahay si sax ah Qalcaddii hore ee Monterreal. Qalcadan waa dhisme taas dhismuhu wuxuu bilaabmay qarnigii XNUMX-naad waxaana la dhamaystiray XNUMX-kii. Marka la eego meesha ay ku taallo, way fududahay in la fahmo in qasrigan laga dhisay meel aad muhiim ugu ah difaaca Rías Baixas dhammaan dadka badda ka yimid. Dadyowga sida Visigoths ama muslimiinta waxay raadkoodii kaga tageen qalcaddan taariikhiga ah ee u soo shaqeysay sidii National Parador ilaa XNUMX-yadii. Maalmahan, waxa aan sameyn karno haddii aynaan nasiib u yeelan inaan ku sii jirno tusaalahan quruxda badan waa inaan ku dhex wareegno. Waxaa jira socod qurux badan oo aad ka arki karto badda meelo kala duwan waxaadna ka arki kartaa Jasiiradaha Cíes meel fog. Socodkan oo qiyaastii ah laba kiiloomitir wuxuu kaloo maraa dhowr xeebood sida Barbeira ama Ribeira. Haddii aan ku jirno xagaaga, marwalba waan istaagi karnaa si aan u qaadanno faashad wanaagsan.
Booqo midabkii Pinta
Sida muuqata warka ugu horeeya ee daahfurka lama filaanka ah ee Ameerika ayaa si sax ah u gaadhay magaaladan yar ee Galicia, halkaas oo Gawaarida Pinta ee Martín Pinzón ayaa yimid. Taasi waa sababta maanta aan u arki karno nooc ka mid ah markabkan magaalada dhexdeeda si loogu xuso dhacdo muhiim ah. Markabku waa dalxiis madadaalo ah, gaar ahaan kuwa yaryar oo gudaheeda ah waxaan ku arki karnaa waxyaabo badan oo kala duwan si aan wax uga barano nolosha dusheeda iyo baararka halkaas oo aan ku baran karno wixii ku dhacay markabka iyo wixii ay ka keeneen Ameerika.
Dhadhaminta caloosha ee bartamaha
Sida meel kale oo ka mid ah Galicia, gastronomy waa qodob aad muhiim u ah. Taasi waa sababta bartamaha Baiona aan xoogaa uga heli karno makhaayadaha lagu cunteeyo suxuunta macaan. Iskusoo wada duuboo, cuntooyinka badda iyo kalluunka ayaa lagula talinayaa, maadaama aaggan xeebta ah ay ku leeyihiin agab ceyriin oo weyn. Dhanka kale, waa inaan sidoo kale tijaabino khamriga, sida Albariño maadaama ay qayb ka yihiin caloosha.
Booqo Bikradda Dhagaxa
La Virgin of the Rock waa taallo taagan meel sare agagaarka xarunta. Way fududahay in la gaaro halkaas halkanna waxaan ka heli doonnaa aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan Baiona, badda iyo Jasiiradaha Cíes ee u dhow. Shaki la'aan, waa safar yar oo qiimo leh, gaar ahaan maalmaha cad ee aan si fiican u arki karno jasiiradaha u dhow.
Tag jasiiradaha Cíes
Warka fiicani waa in haddii aad timaaddo villa xilligii aad kari lahayd ku raaxee safarka jasiiradaha quruxda badan ee Cíes, meel riyo ah. Waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad qaadato doon si toos ah kuu geyn doonta iyaga iyaga safarka xiisaha leh ee ku teedsan qarka dheer. Waxaad joogi kartaa maalinta oo dhan jasiiradda xitaa waxay leeyihiin xero, markaa waxaa jira dad halkaas ku qaata dhammaadka usbuuca ama dhowr maalmood. Waa inaad fiirisaa jadwalka si aad u hubiso inaad qaadatay doontii ugu dambeysay sidoo kale waa muhiim inaad tikityada horay u sii qaadatid maxaa yeelay waxay kuxirantahay waqtiga sanadka waa la iibin karaa. Markaad gasho Jasiiradaha Cíes waxaad ku raaxeysan kartaa xeebaheeda cajiibka ah ee leh biyo aad u qurux badan ama samee dhowr waddo oo socod ah, midkood ayaa kuu kaxeynaya laydhka leh aragti qurux badan oo badda ah.
en el dhammaadka usbuuca koowaad ee bisha Maarso xaflad weyn ayaa lagu xusaa Baiona halkaas oo dadku meel kasta ka yimaadaan. Waa Xisbiga Imaanshaha ee xuska Discovery of America. Xisbigan, dadku waxay ku labistaan ​​dharka xilliyada waxayna ku raaxeystaan ​​dukaamo kala duwan oo ku yaal qaybta hore ee magaalada, iyo sidoo kale bandhigyo ku yaal xeebta iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Haddii aad waqtigaas ku sugan tahay magaalada ama aad isku soo dhowaan karto waxaad ku raaxeysan kartaa jawi weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Maxaa lagu arkaa Baiona, Galicia